चक्कर आउने समस्या छ भने यो उपाय अपनाउनुस्
काठमाडौं, २४ वैशाख – कहिलेकाहीँ लगातार बसिरहेपछि एक्कासि उठ्दा आँखाअगाडि अँध्यारो छाउँछ र चीजहरू घुमिरहे जस्तो लाग्छ । यसैलाई चक्कर लागेको भनिन्छ । शारीरिक कमजोरीका कारण वा मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार कम हुँदा यसो हुन्छ । न्यून रक्तचापका कारण पनि यसो हुन्छ । गर्मीमा कम पानी पिउँदा पनि चक्कर आउन थाल्छ । यसबाट राहत पाउन घरेलु कुराहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
अमलामा भिटामिन ए र भिटामिन सी भरपूर मात्रामा पाइन्छ । यसले शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ र चक्कर आउने समस्याबाट मुक्ति दिन्छ । दुई अमलाको टुक्राको पेस्ट बनाउनुस् । अनि त्यसमा दुई चम्चा धनियाँको बिउ र एक कप पानी मिसाएर रातभरि छोडिदिनुस् । अनि भोलिपल्ट बिहान उठेर यसलाई छान्नुस् र यसको पानी पिउनुस् ।
चक्कर आउने समस्याबाट महले पनि छुटकारा दिलाउँछ । दुई चम्चा महमा दुई चम्चा स्याउको अमिलो मिसाउनुस् र त्यस मिश्रणलाई एक गिलास पानीमा मिसाएर पिउनुस् । दिनमा दुईचोटि यो पिउनुस् ।
कागतीमा भिटामिन सी भरपूर मात्रामा पाइन्छ । यसले शरीरलाई धेरै रोगहरूबाट बचाउँछ र शरीरलाई आर्द्र पनि राख्छ । चक्कर आएमा आधी कागती एक गिलास पानीमा निचोर्नुस् र त्यसमा दुई चम्चा चिनी मिसाएर पिउनुस् । त्यसबाहेक एक चम्चा कागतीको रसमा मरिच र नून मिसाउनुस् अनि त्यसलाई एक गिलास पानीमा मिसाएर पिउनुस् ।
चक्कर आउने एउटा कारण डिहाइड्रेसन हो । व्यायाम गरेका बेलामा पानी नपिउँदा चक्कर आउँछ । त्यसैले दिनदिनै अत्यधिक पानी पिउनुस् । फलहरूको जुस बनाएर पिउन पनि सक्नुहुन्छ ।
अनशनरत डा. केसीको उपचारका लागि मोबाइल भेन्टिलेटर सहित विशेषज्ञ चिकित्सक टोली इलाम प्रस्थान काठमाडौं – इलाममा अशनरत डा. गोविन्द केसीको उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट सातजना चिकित्सकको टोली इलाम प्रस्थान गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य त...
भारतको कर्नाटकमा चर्को राजनीतिक दाउपेच : कांग्रेसका सांसदलाई फकाउँदै भाजपा